Xaflada Banaadiri ee Minneapolis: iyo Xaalada Soomaaliya Maanta | Midnimo Online | Somalia News and Media
Home Diaspora Xaflada Banaadiri ee Minneapolis: iyo Xaalada Soomaaliya Maanta
Xaflada Banaadiri ee Minneapolis: iyo Xaalada Soomaaliya Maanta
Mohamed Barre oo wax ka qora arimaha Soomaalida
Waxaa xalay oo ay taariikhdu ahayda August 15, 2014, lagu qabtay magaalada Minneapolis, ee gobolka Minnesota xaflad wayn ee ay dad badani ka soo qaybgaleen. Xafladaas oo ay soo abaabuleen dad ka mida jaaliyada Banaadiriga, ee uu ka mid yahay jilaaga, heesaaga caanka ah ee loo yaqaano Shariif Jeek.
Xafladaan oo ka duwanayd xafladaha kale ee lagu qabto magaalada Minneapolis, madaama ay ka hadlaysay hidaha, dhaqanka iyo taariikhda jaaliyada banaadiriga. Xafladaan oo la isgu soo dubariday sida ruwaayad oo kale, waxaana loogu magac daray ‘Maxaa Harayoo La Isku Haystaa’. Taasoo ka tarjumaysay dhibta dadwaynaha Soomaaliyeed ay ka dhaxleen dagaalkii sookeeye ee dalka ka bilowday dhamaadkii sanadkii 1990kii. Kasoo ahaa mid aad u saameeyey dhamaan Soomaalida oo dhan, gaar ahaana jaaliyada Banaadiriga.
Ruwaayada sida ay cinwaankeedu ka muuqado, waxay ka hadlaysey cadaalada darada ka dhalatey habkii ay go’aansadeen dowladahii dhashay dagaalkii sokeeye ka dib in ay ku maamulaan wadanka, nadhamaakaas oo loo yaqaano: 4.5ka. Inkastoo dadka qaar ay moodayeen in uu nadhaamkaanu yahay mid wax ka badeli doona arimaha siyaasadeed ee soo wajahay dalka dagaalkii sokeeye ka dib, ka dibna noqday ‘ka dar oo dibi dhal’
4.5ka waxaa uu ka salaysnaa in uu xukun qaybsigeeda lagu saleeyo 5ta qabiil ee Soomaaliyeed, ka dibna la isku afgartey in qabiilada waaween ee Soomaalida ay qaateen midkiiba xubin buuxda, meesha dadka kale, oo ay ugu horeeyaan banaadiriga ay heleen xubin niskeed (.5).
Si kastaba ha ahaatee, xaflada waxaa ka hadlay culimo, aqoonyahano, madax ka tirsan dowlada federaalka iyo dhalin yaro rag iyo gabdho isugu jira oo halkaa lagu martiqaaday. Hadaladoodiina ay fasirayeen dhaqanka qaaliga ah ee lagu xushmeeyo jaaliyada banaadiriga sida dhinaca fanka, majaaliada, dheesha, iyo taariikhda banaadiriga ee ku saleesan nabad jaceelka iyo soo dhawaynta.
Waxaase xusid mudan in dadkii halkaa ka hadlay, uu ka mid ahaa Engineer AbdulAziz Haji Mahamed Hussein, oo ah wiil uu dhalay mid ka mida ahaa abaayaashii xornimada Soomaaliya, oo xisbigoodi ay midaysnaayeen loo yaqiinay: SYL (Somali Youth League), isagoo halkaa ka aqriyey taariikhda banaadiriga, ee uu ka xigtey qoraalkii dal mareenkii muslimka ahaa, ee ku wax ka qoray taariikhda Soomaaliya, gaar ahaana taariikhda dadka reer xeebeedka Soomaaliyeed, ee la oran jiray Ibnu Batuuta.
Waxaa Qoray: Mohamed Barre – Junlay ‘Buluf” qoraa madaxbanaan, waxna ka qora arimaha Soomaalida, degana magaalada Minneapolis, MN – junlay99@aol.com.